नेपाल एयरलाइन्सले जहाजमै काण्ड गर्न थालेपछि यात्रु तनाबमा, के हो यथार्थ ? - jagritikhabar.com
नेपाल एयरलाइन्सले जहाजमै काण्ड गर्न थालेपछि यात्रु तनाबमा, के हो यथार्थ ?
पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा उडान गरिरहेको नेपाल एयरलाइन्सले जहाजभित्रै कार्यालय बनाई सेवा प्रवाह गरेपछि सर्वसाधारण यात्रु मर्कामा परेका छन्।
चाडपर्व मनाउन गृह जिल्ला पुगेका यात्रु गन्तव्य फर्किने क्रम बढेसँगै कोल्टीमा यात्रुको चाप बढेको छ। तर, हाल सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा उडान गरिरहेको नेपाल एयरलाइन्सले प्रत्येक जिल्लाको उडानमा आफ्ना ८ जना कर्मचारी बोकेर हिँड्ने गरेपछि सर्वसाधारणलाई सेवा पाउन समस्या भएको हो।
सुदूरपश्चिमको बाजुरा, बझाङ, अछाम, दार्चुला र डोटीलगायत जिल्लामा उडान भरिरहेको नेपाल एयरलाइन्सले प्रत्येक जिल्लामा जहाज उडानको पेपर बनाउने कर्मचारी नभएको भन्दै ८ जना कर्मचारी बोकेर उड्ने गरेपछि सर्वसाधारणले सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्।
नेपाल एयरलाइन्सले उडान भर्ने प्रत्येक उडानमा १८ जना यात्रु बोक्नु पर्नेमा ८ जना कर्मचारी बोक्ने गरेका कारण सर्वसाधारण १० जनाले मात्रै यात्रा गर्न पाएका छन्।
हाल उडान भरिरहेका जिल्लामा नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारी नभएका कारण नेपालगन्ज बाटै कर्मचारी बोक्नु पर्ने भएकाले आम सर्वसाधारणले सेवा नपाएको नेपाल एयरलाइन्स बाजुरा प्रमुख उमाकान्त न्यौपानेले बताए।
बाजुराको स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिका ३ जुकोटका लोकेन्द्र शाहीले वर्षातका कारण बाटो अवरुद्ध अवस्थामा रहेकोले सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाजुरालगायत पहाडी जिल्लामा जहाजले सेवा दिनु राम्रै भए पनि,
नेपाल एयरलाइन्स जस्तो सरकारी कम्पनीले कर्मचारी छैन भनेर जहाज भित्रै कार्यालय बनाई एयरपोर्टमा घुम्नु हास्यास्पद भएको बताए।यो समाचार प्रकासित भएपछि मन्त्रि आलेले एक्सनमा जाने बताएका छन्।
उनले एयरपोर्टबाटै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेलाई फोन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा सेवा प्रवाह गरिरहेको नेपाल एयरलाइन्सको सो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएको बताए।
फोनमा मन्त्री आलेले त्यस अवस्थाको बारेमा आफूलाई जानकारी नआएकाले त्यस्तो अवस्था भए पनि समस्या केही दिनमै समाधान हुने बाएका छन् । मन्त्रि आलेले अब अर्को चमत्कार गर्ने बुझीएको छ।
तेस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले आफूहरुको १०औं महाधिवेशनमार्फत सर्वसम्मत रुपमा केपी शर्मा ओली अध्यक्षमा चयन हुने धारणा राखेका छन्।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा नेता रायमाझीले १०-१२ मंसिरमा चितवनमा सम्पन्न हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनले ओलीलाई सर्वसम्मत फेरि अध्यक्ष चुन्ने बताए। ‘हामीले विधान महाधिवेशनमा विधान सर्वसम्मत पारित गर्‍यौं।
अब नेतृत्व चयन गरिने हो। अब पार्टीमा नयाँ नेतृत्वको निर्माण गर्छौं। सायद, केपी शर्मा ओली सर्वसम्मत् अध्यक्ष हुनुहुन्छ। विधान अधिवेशनले पनि यो कुराको संकेत गरिसकेको छ,
उनले भने। एमालेले आफ्नो आन्तरिक काम सम्पन्न गरिसकेको भन्दै उनले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा केन्द्रीत भएर अब संगठन विस्तारमा अघि बढ्ने बताए। इमान्दार मेडिया बाट